Madaxwayne Shariif iyo Gaas oo khilaaf uu ka dhex taagan yahay | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Madaxwayne Shariif iyo Gaas oo khilaaf uu ka dhex taagan yahay
Madaxwayanaha iyo raysal wasaaraha dowladda KMG ee waqtigoodu sii dhamaanayo ayaa waxaa markii ugu horaysay soo shaac baxaya khilaaf xun oo ka dhextaagan labadan masuul.
Khilaafka oo muddooyinkanba jiray ayaa si rasmi ah usoo shaac baxay markii uu shalay uu raysal wasaare C/weli Maxamed Cali Gaas uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u tartamaya doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee la qaban doono 20-ka bishan Augost.
Warar hoose oo aanu ka helnay xafiiska raysal wasaaraha ayaa sheegaya waxyaabaha labaadan masuul ay isku khilaafeen inay qayb ka tahay warbaahinta dowladda sida Radio-ga iyo telfishinka oo howlwadeenada ka shaqaysa diideen baahinta ololihii musharaxnimo ee Dr Cabdi weli Maxamed Cali Gaas shalay ka bilaabay magaalada Muqdisho halka warbaahinta dowladda uu si gaar ah u adeegsado madaxwayne Shariif Sheekh Axmed.
Madaxwayanaha ayaa kulan gaar ah la yeeshay wasiirka gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise oo uu kala hadlay xilka raysal wasaaraha inuu isagu sii hayo,iyadoona Sheekh Shariif uu doonayo saacadaha soo socda inuu ku dhawaaqo inuu xilka ka qaaday raysal wasaare Gaas , inkastoo arinkaasi aan la’ogayn qaabk ay suurto gal unoqon karto, maadaama wakhtiga labada ninba uu gabaabsi yahay.
Musharaxiin badan oo u tartamaya doorashada xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa horay ugu dhaliilay madaxwayne Sheekh Shariif inuu si gaar ah uu ololihiisa ugu adeegsanayo hantidii qaranka oo warbaahinta dowladda ay ka mid tahay.
Waqtiga beesha caalamka ay u cayimtay qabashada doorashada madaxtinimo ee dalka Soomaliya oo ku beegan 20-ka Agoosto ayaaa waxaa ka harsan muddo 12-maalmood oo qura.
Dagaalkii Boqolka Kun ee Doollar: Sheeko Gaaban Madaxweynaha Shariif oo saxiixay qorshaha ammaanka iyo xasilinta Qaranka ee lagu shaqeyn doono 5ta sano ee soo socota.